Hwakanyorova husiku ... makore 196 mushure mekufa kwaJohn Keats | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Vanyori, Nhetembo
John Keats (London, 1795 - Roma, 1821)
John Keats ndomumwe wevanonyanya kukosha vadetembi ve XNUMX yezana ramakore Chirungu rudo, asi zvakare kubva panguva iyoyo kutenderera pasirese. Nhasi zvazadzikiswa 196 makore yekufa kwake muRoma. ndanga ndine 25 makore uye, semudetembi akanaka wezverudo uye nemweya usina kusimba, akarwara ndokufa tuberculosis, sepamberi pehama yake naamai vake.
Kunge vamwe vadetembi nevanyori vazhinji veBritain ndakaiverenga mune rangu basa uye, kunyangwe nhetembo isiri chinhu changu, kunzwisisika kuri. Uye iyo ndima Keats zvakanyanya wakanaka, unofadza uye unofungidzira mutauro uye zvakare wakazara nemanyoro. Mune mamwe mazwi, kuratidzwa kwakakwana kweiyo yaive nemweya wake. Kubva kune imwecheteyo denderedzwa denderedzwa yenguva, iye, Percy Bysshe Shelley naIshe Byron vanogona kunge vari Utatu Hutsvene wevanyori vakuru vekuBritain vane rudo.
Mamwe ehupenyu hwake
John Keats akaberekerwa kumucheto kwe London uye, mudiki kwazvo, yaive nherera yababa. Amai vake vakaroorazve, asi hazvina kufamba zvakanaka vakasiya murume wavo. Vakaenda kunogara nambuya vaKeats muEnfield. Rini Amai vake vakafa, ambuya vakagadza vachengeti vaviri vaichengeta nherera. Ava vakatora Keats kubva pachikoro chake ndokumuita iye chiremba anovhiya anodzidza. Asi akazvipira zvakanyanya kumabhuku. Ndakapedza kudzidza mukati Pharmacy, asi akashanda makore maviri asati azvipira zvizere kunhetembo.
La simba rakakura izvo zvaaive nazvo raive basa remunyori wezana ramakore rechiXNUMX Edmund spenser, akafuridzira nhetembo yake yekutanga: Mukutevedzera Spenser. Akakurumidza kupinda mudenderedzwa rakasarudzwa revanyanduri vakakurumbira venguva yake, saShelley naIshe Byron.
En 1817 akaburitsa muunganidzwa wake wekutanga wenhetembo dzakanzi nyore Nhetemboque hazvina kugamuchirwa zvakanaka. Zvimwe chete zvakaitika endymion, nhetembo yake ine mukurumbira. Pakati akarasikirwa neimwe hama, izvo zvakamubata zvakanyanya. Akafunga kuenda kuLondon, kumba kweshamwari yake yaakafamba nayo kuburikidza neScotland neIreland. Asi iyewo, akange atoratidza kare zviratidzo zvechirwere.
Ndipo paakasangana Fanny brawne, waakadanana naye zvakapenga murudo. Iye ndiye akafuridzira nhetembo dzake zhinji, kunyanya akateedzana odes. Hutano hwake pawakawedzera, akafunga kutsvaga mamiriro ekunze aigona kuvandudza ndokutanga kuenda kuNaples. Asi akafa mwedzi mishoma gare gare mukati Roma. Pamusoro peguva rake pane ino yakanaka epitaph: "Pano panonyepa munhu ane zita rakanyorwa mumvura".
Ndiyo mudiki yevakuru veBritish romantics, asi zvakare imwe yeiyo anonyanya kukosha mazwi mumutauro weChirungu. Ichokwadi icho Haana kuwana kuzivikanwa kwaakakodzera muhupenyu, asi akazokuwana gare gare. Uye saka basa rake rinoonekwa serakakura kuratidza kuchena. Ini ndanga ndakatarisa kuti ndisvike iyo runako chose uye pasina kupokana mazhinji emavhesi ake anayo. Kufanana neiyo ya Hwakapfava husiku, Akaisirwa muodhi yake inozivikanwa, Ode kune husiku.
Asi nhetembo senge Mukadzi akanaka asina tsitsi, Kuwa kweHyperion o Pamusoro pegungwa. Ini pachangu ndakagara ndichigara neizvi Iva netsitsi, tsitsi, rudo! Asi tsvaga mamwe acho. Zvisinei, ndeupi mugumo uri nani wemwedzi uno wekudanana waKukadzi uyo uri kupera.
Iva netsitsi, tsitsi, rudo! Ida tsitsi!
Rutsvene rudo rwusingaiti kuti titambure pasina magumo,
rudo rwepfungwa imwechete, kuti usapopote,
kuti iwe wakachena, hauna masiki, uye hauna gwapa.
Rega ndive newe zvakakwana ... Iva zvese, zvese zvangu!
Icho chimiro, iyo nyasha, iko kunakidzwa kudiki
zverudo rwuri kutsvoda kwako ... maoko iwayo, iwo maziso ehumwari
iyo inodziya, chena, inopenya, inofadza chipfuva,
kunyange iwe pachako, mweya wako netsitsi ndipe zvese,
usachengeta atomu yeatomu kana ini ndikafa,
Kana kana ndikaramba ndichirarama, ingori muranda wako anoshoreka
Kanganwa, mumhute yekutambudzika kusingabatsiri,
zvinangwa zvehupenyu, kuravira kwepfungwa dzangu
kurasikirwa nekusagadzikana, uye chishuwo changu chebofu!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Hwakanyorova husiku… makore 196 mushure mekufa kwaJohn Keats
Bhuku idzva naHaruki Murakami rinouya munguva pfupi
Mabhuku ekushandira pamanzwiro nevadiki